OtterBox inotangisa mhando nyowani yemabutiro eApple Watch | Ndinobva mac
OtterBox inotangisa mhando nyowani yematare eApple Watch
Chero mudziyo wemagetsi watinoshandisa zuva nezuva unogona kubatwa nekumwe kukuvara, kunyanya kana tichiushandisa nguva dzose uye chero munzvimbo nemumamiriro. Kushandisa mabutiro ndiyo nzira yakanakisa yekuchengetedza mudziyo sezuva rekutanga uye dzivisa kukuvara kunogona kudhura kugadzirisa.
Zvirokwazvo vazhinji venyu munoshandisa makesi eiyo iPhone yako, uye pamwe zvakare neyako MacBook kana iwe uchiitora kubva pano uchienda uko. Iyo Apple Watch zvakare ine chayo chayo akasiyana makavha ayo Ivo vanotibatsira kuti tirege kurohwa kune ese ari maviri furemu uye girazi chairo.
Kana iwe uchitsvaga kesi yeApple Watch inoidzivirira kubva mukuvhunduka, unogona kusarudza imwe yemhando dzakasiyana dzatinogona kuwana kuAmazon. Asi kana iwe uchinyatsoda kuchengetedza chishandiso chine mhando kesi, iyo yakasimba OtterBox achangobva kuunza kesi nyowani yekuchengetedza mudziyo wedu.
Tiri kutaura nezve iyo EXO Edge Nyaya, inoenderana kesi kubva kuApple Watch Series 3, iyo inokodzera segirovhosi kuchinhu chedu. Ichi chifukidziro chinodzivirira chinovhara pane chero kudonha nekupa dziviriro pachikamu chepamusoro, icho chinodzivirira girazi kubva mukukanganiswa nekudonha kupi nekupi.
Kusiyana nedzimwe tambo, kuiswa kweiyi tambo kuri nyore kwazvo, sezvo isu tichifanira chete kubvisa bhanhire, slide iyo Apple Watch pamusoro penyaya uye tangazve mabhanhire. Nenzira iyi, tinokwanisa kushanduka mazuva ese, kana kana tichiona zvakakodzera, mabhanhire echigadzirwa chedu tisingafanire kuve Engineer.
Sezvinotarisirwa, iyo kesi inowirirana zvakakwana neasina waya kuchaja chishandiso uye inotibvumidza kuwana zvirinyore zvese zviri zviviri bhatani rerutivi uye korona yedhijitari. Iyi kadhi inogadzirwa ne polycarbonate uye TPE zvinhu, saka ivo vanonoka kushamisika uye havazvitakure mukati mekesi.
Iyo OtterBox EXO Edge Nyaya yeApple Watch inowanikwa ne $ 29,95 uye iri nzira yakanakisa yekuchengetedza mudziyo wako kana iwe usiri kuda kutsvaga mhinduro dzakachipa dzatinowana muAmazon
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » OtterBox inotangisa mhando nyowani yematare eApple Watch
Nhasi Apple inozivisa yekutanga "Apple Music Awards"
Inonakidza 2 ye macOS ikozvino ine 20% dhisikaundi